Kahor Cristiano Ronaldo… Goormee ayaa la dhaliyay seddexdii ugu danbeesay ee Koobka Aduunka? – Gool FM
Kahor Cristiano Ronaldo… Goormee ayaa la dhaliyay seddexdii ugu danbeesay ee Koobka Aduunka?
Dajiye June 15, 2018
(Russia) 15 Juunyo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey seddexleey saddexley kulankii ugu horeeyay uu xulkiisa Portugal kaga daah furteen koobka aduunka 2018, taasoo ka caawisay xulkiisa inay ku kala baxaan xulka qaranka Span barbaro 3-3
Xidiga kooxda Real Madrid ayaa noqday ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee qeyb kasoo noqday liiska ciyaartoyda goolsha saddexleyda ka dhaliyay kulamada koobka aduunka.
Ronaldo waxaana rikoodhkan kaga horeeyay xidiga xulka Switzerland Xherdan Shaqiri, kaasoo seddex gool ka dhaliyay Honduras koobkii aduunka ee 2014 lagu qabtay dalka Brazil.
Si kastaba kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray xulalka Portigal iyo Spain ayaa ku soo idlaaday barbaro 3-3 iyadoo wacdaro uu kulankan kala soo muuqday xidiga Cristiano Ronaldo oo saddex jeer gaaray xulka La Roja.
Waxaa xusid mudan in Group B uu haatan hogaamineyo Iran kadib markii ay guul ka gaareen Morocco, kadib goolkii waqtiga dhimashada waxaa kaalinta labaad fadhiya Portugal halka saddexaad uu fadhiyo Spain Group B.
Kadib Seddaxleydii Ronaldo Maxa laga Diiwaan Galiyay Kulankii Dhexmaray Portugal iyo Spain
HORDHAC: France vs Australia